I-B&B Casa Mascia
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPaola
I-B&B iseDolianova, imizuzu engama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya.
Ufikelela kunxweme olukufutshane (Poetto, Cagliari) kwimizuzu engama-20 ngokunjalo.
ICasa Mascia ikwidolophu yaseDolianova.
Iza namagumbi okulala amathathu kunye namagumbi okuhlambela amathathu, igumbi lokuhlala elinye, ikhitshi elinye kunye negadi.
Kwiziko lembali laseDolianova, ecaleni kwesitrato esidala sephondo ungayifumana indlu yentsapho yaseMascia. Likhaya elihle lakudala laseCampidanese, elakhiwa ngasekupheleni kweNkulungwane ye-17 kunye nokuqala kweNkulungwane ye-18. Ibonisa uhlobo oluqhelekileyo lwezakhiwo ze-18th Century, kunye neendonga zayo ezinkulu zamatye, uphahla lwe-tile yaseSardinian yasekuqaleni, iiplanga kunye neesilingi zomthi we-chestnut kunye nemithi yejunipha yaseSardinian. kwindawo yegadi. Le ndlu inendawo yokutyela enendawo enkulu yomlilo eyamkelekileyo enekhitshi edibeneyo, amagumbi okulala amathathu abanzi, onke anempahla yakudala yeMeditera kunye namagumbi okuhlambela amabini aneshawari.
Le Ndlu imi kumbindi wedolophu engomnye wabavelisi abakhulu bewayini kunye neoyile yomnquma kulo lonke elaseSardinia. Kukho iindawo ezininzi zezinto zakudala onokuthi uzindwendwele kwaye ikwimizuzu eli-15 kuphela ngemoto ukusuka eCagliari, ikomkhulu laseSardinia kunye nolona lwandle lude nolona ludumileyo phakathi kwesixeko kulo lonke elaseYurophu. Kuba umhambi ongenamdla wokuziqhubela, kukho uloliwe omncinci wasekhaya ohamba imizuzu embalwa ukusuka kwindlu yaseMascia. Lo loliwe ubizwa ngokuba nguloliwe oluhlaza uthatha utyhutyha amaphandle amahle nokuba uye eCagliari okanye kwezinye iidolophu ezincinci zemveli ezicela ukuphononongwa.
Intsapho kaMascia yenze indawo enobubele kunye neyamkelekileyo kuzo zonke iindwendwe zabo, kwaye bahlala bekulungele ukunceda, ngeengcebiso , ulwazi malunga neSardinia kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhlola.
4.83 ·Izimvo eziyi-20
4.83 · Izimvo eziyi-20
I-B&B isembindini wedolophu yaseDolianova, kwaye Ilungile kwaye ikhuselekile. Ayisiyiyo indawo enomdla kakhulu kwaye wonke umntu uyazi enye nenye.